त्यसैले आज हामी खेल "Maynkraft" मा तैयार फ्रेम कसरी बारेमा कुरा हुनेछ। साथै, यो प्रयोग सामाग्री को एक नम्बर पूरा गर्न आवश्यक हुनेछ। हामीलाई चाँडै यस कठिन कुरा तपाईंलाई सामना गरौं।
तर तपाईं "Maynkraft" मा फ्रेम तैयार अघि बारेमा हामी अन्त मा वस्तु कस्ता प्राप्त तपाईं कुरा गर्नुपर्छ। शायद यो bauble, छैन जो tinkering गर्नुपर्छ?
वास्तवमा, खेल मा फोटो लागि फ्रेम - यो एक ब्लक छ, जसमा तपाईं यो वा त्यो वस्तु राख्न सक्छ, र त्यसपछि पर्खाल तिनीहरूलाई सजाउनु। यो भन्दा साधारण फ्रेम रूपमा सेवा गर्दैछन्। तपाईं ब्लक भित्र विषय गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम सजिलै नष्ट गरे। एक पटक तपाईं तोड्न वस्तु नै फ्रेम छोड, तर अझै पनि विषय राख्न यो dropnetsya। त्यसैले यसलाई यसको लागि प्रयोग फेला पार्न एकदम सम्भव छ। हामीलाई कसरी तैयार फ्रेम हेरौं। हामी आवश्यक स्रोतहरू भेला गर्न थाल्छन्।
हामी आवश्यक पहिलो कुरा - सबै भन्दा साधारण छडी छ। तर, हामी आफ्नो बरु ठूलो संख्या जम्मा गर्न आवश्यक छ। धेरै वस्तुहरू सिर्जना गर्न गर्भधारण भने (केवल फ्रेम), यो भविष्यको लागि तिनीहरूलाई मा शेयर राम्रो छ।
साधारण लाठी - यो खेल को "निर्माण" मा प्रयोग गरिन्छ कि धेरै साधारण स्रोतको छ। त्यसैले यदि तपाईंलाई लाग्छ कि, "Minecraft" (वा अन्य कुनै पनि वस्तु) मा तैयार एक फ्रेम, तपाईँ पक्का हुन सक्छौं - ठूलो सम्भावना तपाईंलाई लाठी खोज्न छ।
उनलाई कहाँ छ? सामान्य मा, विषय प्रकृति पाउन सकिन्छ। शायद हुनत। अक्सर बस पीठ मा सिर्जना गरिएको छ। यो एक काठ बोर्ड आवश्यक थियो। र तिनीहरूलाई बस भन्दा बढी हुन प्राप्त गर्न साँच्चै हो।
यो कुरा बोर्डहरू काठ प्रशोधन पछि प्राप्त गर्दै छ। बिल्कुल कुनै पनि रूख यो सामाग्री उत्पादन गर्न सक्छन्। यसरी, काम को एक बिट, उदाहरणका लागि, ओक, तपाईं आफैलाई केही स्रोतहरू पाउन भने।2बोर्डहरू align -4लाठी प्राप्त। एक पटक तपाईं पहिले नै लाठी र dosochek को राम्रो आपूर्ति भनेर निश्चित गर्नुभयो, तपाईंले सार्न सक्छ। हामी "Maynkraft" मा कसरी तैयार फ्रेम बुझ्न जारी।
अब हामी थप रोचक र कडा सामाग्री तपाईं आउँछन्। उदाहरणका लागि, तपाईं अझै पनि आफ्नो घर भित्री संरचना बारे सोच छ भने, यो सबै भन्दा साधारण छाला बढाउनका चोट छैन।
तपाईं अनुमान सक्छ, यो जनावर खाल गर्न आउँछ। वास्तवमा, छाला slain जनावर देखि गिरने।2कुराहरू अधिकतम। यो हुन सक्छ, र यति भनेर केहि ड्रप छैन।
तपाईं खेल मा तैयार फ्रेम कसरी सोच छ भने "Maykraft" तपाईं रोगी हुन सक्छ र .... हतियार। को शिकार मा प्रारंभ। हाम्रो स्रोत फंगल गाई, साधारण गाई, साथै घोडाहरू देखि झिकिएको छ। तथापि, तपाईं एक अधिक दयालु तरिका के - माछा मार्ने जानुहोस्। शायद तिमी भाग्यमानी हुनुहुन्छ र तपाईं आफै छाला को टुक्रा को एक जोडी निकाल्न सक्छन्। आफैलाई यो स्रोत केही एकाइहरु लो - यो भविष्यमा थप तपाईं उपयोगी छ। विशेष गरी तपाईंले गम्भीर घर प्रस्तुत सोच छ भने। तयार हुनुहुन्छ? त्यसपछि का कसरी तैयार फ्रेम हेर्न दिनुहोस्। यो फोटो, तपाईं, पाठ्यक्रम, छैन रही, तर यहाँ एउटा नक्सा, वा अन्य कुनै पनि साना वस्तुको - सजिलै।
खैर, अब सबै भन्दा रोचक मामला, हाम्रो सुविधा को अर्थात् सिर्जना गर्न हामी जानुहोस्। वास्तवमा यो केवल आजको विषय लागू, धेरै सरल छ। बिन्दु स्रोतहरू लागि खोज एकदम लामो समय लाग्छ भन्ने छ। विशेष गरी यदि तपाईं बस खेल सुरु भयो।
सुरु गर्न, छाला तयार। खुसीको कुरा, सबै सरल छ - हामी स्रोत को केवल एक एकाइ आवश्यक छ। यस पीठ (दोस्रो पङ्क्ति, दोस्रो "सेल") को केन्द्र मा यो ठाँउ हो। अब हामी हाम्रो रूख र उसलाई अलि 'pohimichit "फर्कन सक्नुहुन्छ।
यो कुरा भने गरिएको छ रूपमा, हामी बोर्ड आवश्यकता हो, छ। कुनै समस्या - तपाईं काठ को समान प्रकारको संग काम गरेको छ भने, तपाईं आनन्द उठाउन सक्छौं। भने, भन्नु, तपाईं सन्टी र ओक कटौती, यो केवल एक प्रकार (रंग) को बोर्ड संयोजन गर्न आवश्यक छ। केवल "Maynkraft" - काठ को6प्रकार।
तपाईँ छडी सिर्जना गर्नुहोस्, तपाईं तिनीहरूलाई पीठ मा छाला वरिपरि राख्न सक्नुहुन्छ। फोटो फ्रेम सिर्जना गर्न 8 लाठी डायल गर्न हुनेछ। ती सबै मुक्त "सेल" भर्न र के हुन्छ हेर्नुहोस्। तपाईं एक सानो प्यारा काठ फ्रेम हुनेछ। सबै छ।
तपाईं यसलाई चाहनुहुन्छ रूपमा अब तपाईं वस्तु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया कार्ड वा हतियार भित्र राख्नुभयो। यो एक स्तम्भ जस्तै कुरा बाहिर जान्छ।
Minecraft मा एक धनुष कसरी बनाउने विवरणहरू
"Varfeyse" मा "परिसमापन" को खण्ड: सुझाव, राज
खेल लाल आर्केस्ट्रा 2: समीक्षा, Cheats, कोड र फैशन: Stalingrad को हीरो
Samorost 2: गाइड
हाइड स्थान Blackfathom Deeps
कसरी GTA4मा विद्यमान गर्न
"Artsakh" - वोदका आर्मेनियाली। Mulberry, cornel वोदका "Artsakh": समीक्षा, मूल्य
कीव र यसको उपनगर लोकप्रिय रिसोर्ट्स
लोकप्रिय विचार - शिल्प आफ्नै हातले "शीतकालीन"। जाडो क्रिसमस शिल्प
19औं शताब्दीको वास्तुकला: निर्देशन र विवरण
अब्खाजिया: पेंशन "सबै समावेशी", "बुफे"। समुद्र द्वारा परिवार छुट्टी
जहाँ मास्को को Matrona को चिहान?
बार्सिलोना सबैभन्दा लोकप्रिय संग्रहालयहरु
Helianthus annuus: खेती, वर्णन र प्रकार को विशेषताहरु